उत्कृष्ट सेल्फिका लागि चार एप नछुटाउनुस् » Khulla Sanchar
उत्कृष्ट सेल्फिका लागि चार एप नछुटाउनुस्
सामाजिक सञ्जालमा लोभलाग्दो सेल्फी पोष्ट गर्नु प्रतिष्ठा बिषय बनिसक्यो । नयाँ र उत्कृष्ट इफेक्टसहित गुणस्तरीय सेल्फी खिच्न तपाइँको मोबाइलको क्यामेरामात्र पर्याप्त हुँदैन ।
यसका लागि तपाइँले केही फोटो सम्पादन गर्ने र इफेक्ट भर्ने एपहरु पनि स्मार्टफोनमा संग्रह गरिराख्नुपर्छ । जसले गर्दा तपाइँले प्रकाश नपुगेका सामान्य तस्वीरलाई इफेक्टसहित उत्कृष्ट बनाइ पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसका लागि केके हुनसक्छन उपयुक्त बिकल्प ? एप स्टोरमा निःशुल्क डाउनलोड गर्न पाइने केही एपहरुको सूची यस्तो छ ।
१. प्रिज्मा (Prism):
सेल्फीमा मनमोहक इफेक्ट भर्नका लागि सायद प्रिज्मा जस्तो अरु एप छैन होला । यो फोटो एडिटिंग एप सूरुमा एप्पलको आइ ओ एस का लागि मात्र उपलब्ध थियो । तर यसको हाते स्केच जस्तै मनमोहक इफेक्टका कारण यसले खुबै लोकप्रियता कमायो र एन्ड्रोइड फोनका लागि समेत उपलब्ध गराइयो । यसमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्मार्टफोनको जुनसुकै क्यामराबाट फोटो क्लिक गरिसकेपछि यो एपबाट आफुले चाहेको इफेक्ट छनोट गर्न सक्छन् । यसमा कुल ३६ फिल्टर उपलब्ध छन् र यसले आर्टिफिसियल टेक्नोलोजीको उपयोग गर्दछ ।
राम्रो सेल्फी पनि लिने र सेल्फीमा आफु अगाडिको मनमोहक दृश्य समेत समेटियोस् भन्ने चाहना कसको नहोला ? फ्रन्टब्याक एपले तपाइँलाई यहीँ विकल्प पेश गर्नेछ । यो एपको प्रयोग गर्दा स्मार्टफोनले एकसाथ फ्रन्ट र रियर दुबै क्यामराबाट फोटो क्लिक गर्दछ । त्यसपछि दुइवटै क्यामराले खिचेका व्यक्ति तथा दृश्यका दुबै फोटा मिलाएर फाइनल फोटो तयार गर्दछ । यो एप पनि आइओएस र एन्ड्रोइड दुबैमा उपलब्ध छ ।
३.युक्याम पर्फेक्ट (YouCam Perfect):
वास्तवमा मानिसहरुका लागि कुनैप्नि सेल्फी धेरै महत्वपूर्ण हुनसक्छ । धेरै मेहेनत गरेर सेल्फी खिच्यो, तर यदि ब्याकग्राउण्डमा नचाहिँदा दृश्य समेत समावेश भए पनि बेकार भयो । यस्तो बेला युक्याम पर्फेक्ट नामक एप काम आउँछ । केही क्लिकमै प्रयोगकर्ताले यो एपमार्फत फोटोको पृष्ठभूमिमा भएका वस्तुहरु हटाउन सक्दछ । यो एप पनि आइओएस र एन्ड्रोइड दुबैमा उपलब्ध छ ।
४.क्याण्डी क्यामेरा ,एन्ड्रोइडमा मात्र (Candy Camera):
एन्ड्रोइड फोनका लागि मात्र उपलब्ध यो एप उत्कृष्ट इफेक्ट तथा फिल्टरले युक्त छ । यसमा ब्यूटी फंक्सन, स्किन स्मूथनिंग इफेक्ट, स्टिकर थप्ने अप्सन जस्ता फिचर पनि उपब्ध छन् । सानो साइजको हुने भएकाले यो एपले स्मार्टफोनमा कम मात्र ठाउँ ओगट्छ र जुनसुकै एन्ड्रोइड फोनमा पनि काम गर्दछ । कमसल क्यामराले खिचेको फोटोलाई पनि उत्कृष्ट स्वरुपमा ढालिदिने काम गर्छ यसले ।